Akhrisato Fariinta Qiirada Leh Ee Uu Eden Hazard Ku Macasalaameeyay Kooxdiisii Hore Ee Chelsea-Goormaa Santiago Bernabéu Stadium Lagu Soo Bandhigayaa? - Gool24.Net
Akhrisato Fariinta Qiirada Leh Ee Uu Eden Hazard Ku Macasalaameeyay Kooxdiisii Hore Ee Chelsea-Goormaa Santiago Bernabéu Stadium Lagu Soo Bandhigayaa?
June 8, 2019 Mahamoud Batalaale
Kadib markii ay ugu danbayn Real Madrid si rasmi ah ugu dhawaaqday heshiiska Eden Hazard, waxa uu xidiga reer Belgium qaatay qalinka iyo warqada si uu macasalaamayn qiiro leh ugu qoro jamaahiirta iyo kooxdiisii hore ee Chelsea.
Eden Hazard ayaa saxiixay qandaraas shan sanadood uu Real Madrid ku joogi doono waxaana heshiiskiisa saxaafada iyo jamaahiirta lagu soo bandhigi doonaa Santiago Bernabéu stadium maalinta khamiista ee June 13.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo turjuntay fariinta uu Eden Hazard ku macasalameeyeey jamaahiirtii sanadaha badan kooxda Chelsea sida waalida ah ugu soo taageerayay halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
Fariinta Eden Hazard oo ah mid aad u dheer ayuu ku bilabay: “Ku Socota Saaxibadayda iyo Qoyskayga Chelsea”
“Hadda waad ogtihiin in aan ku biiri doono Real Madrid. Wax si r ah may ahayn in ay riyadayda ahayd in aan iyaga u ciyaaro tan iyo markii aan carruurta ahaa ee aan goolkaygii ugu horeeyay dhaliyay”.
“Waxa aadka ugu fiican ayaan isku dayay in ayna naftayda qasin ama kooxda ee waqtigan adag ee intii lagu jiray wararka xanta iyo dareenka saxaafada gaar ahaan lixdii bilood ee ugu danbeeyay”.
“Hadda waxay kooxdu gaadhay heshiis, waxaanan rajaynayaa in aad fahantaan ujeedada boggayga xiga ee sida ay tahay in qof kasta oo idinka mid ahi uu ahaan lahaa marka aad haysataan fursada aad ku fulin kartaan riyadiina”.
“Waxa ugu wayni waa ka bixitaanka Chelsea iyo go’aankii ugu adkaa ee waayahayga ciyaareed ee ilaa maanta. Anigu waxaan jeclaaday waqti kasta oo aan Chelsea ku soo qaatay isla markaana hal mar waligay maan u tixgalin in aan Chelsea koox kale uga baxo”.
“Anigu waxaan ahaa 21 sano jir kaliya markii aan ku soo biiray, sidaa daraadeed, nin ahaan iyo ka ciyaartoy ahaan ayaan dhamaantiin idiinla koray, waxaad kadib iga caawiseen aniga in aan noqdo kabtanka kooxda xulka qaranka Belgium.
“Dabcan waqtiyo adag ayaa jiray ee guud ahaan ka koox ahaan iyo aniga shaqsi ahaan, tani waa xirfada kubbada cagta.
“Si kastaba ha ahaatee, aniga ahaan kubbada cagta waxay iigu saabsan tahay kubbada cagta ku haynta, ciyaarista kulamada iyo ku raaxaysashada daqiiqad kasta, waxayna nasiib ku yeelanay in aynu ciyaarno ciyaarta quruxda badan”.
“Xataa markii aynaan si fiican u ciyaarayn, anigu waxaan isku dayay in aan sameeyo waxayga ugu fiican, waxaana mahad ku leh taageeradiina layaabka leh, ruuxda dagaalyahanimada leh, rabitaanka iyo iska diidida in la isdhiib waxayna ka mid tahay dhaqanka halka ee Chelsea oo si toos ah idiinka timid”.
“Marka aan dib uga fikiro waqtiyadaydii khaaska ahaa ee maaliyada Chelsea, waxyaabo aad u badan ayaa jira, waxaynu nasiib ku lahayn in aynu guulaysanay kulamo aad uga badan inta aynu guuldaraysanay”.
“Kuwa aniga igaranayaa way fahansan yihiin in ayna aniga ahayn ka liisgaranaynayaa waxa aynu ku guulaysanay, wax dhan ee aan sheegi karaa waa in ay cajiib ahayd abaal marin kasta oo ka koox ahaaneed iyo ka shaqsi ahaaneedba”.
“Chelsea iyo gaar ahaan taageerayaasha Chelsea markastaba meel khaas ah ayay qalbigayga kaga jiri doonaan, waxa xiga ee aan eegi doonaa waa natiijooyinkiina. Waxaan rajaynayaa in xili ciyaareedka soo socda layskugu keen aadiyo Champions league, sidaa daraadeed waan kulmi karnaa markale”.
“Inta aanan tagin, mahad celinta ugu danbaysa waxaa iska leh qof kasta oo kooxda jooga ee dadaalkii waynaa ee aan waqti kasta ugu soo noolayn.
“Dhamaan ciyaartoydii hore ee aan waqtigii ku haboonaa macasalaamaynay, laakiin waxaa waajib igu ah in aan u mahad celiyo mulkiilaha Mr Abromovic iyo boodhkiisa ee iga caawiyay mid ma aha ee laba riyooyin ee ah in aan ugu horayn noqday ciyaartoy Chelsea ah, kadib in aan noqday ciyaartoy Real Madrid ah”.
“Waxaan qof kasta oo idinka mid ah u rajaynayaa saaxiibtinimada ugu fiican”.